imveliso ew usana usana ukukhasa ukhuko ethambileyo ethambileyo EVA amagwebu abantwana non-slip yokudlala mat usike igumbi lokulala ekhaya abantwana abakwazi ukukhasa phantsi
Ubume obuthambileyo, ukuqina okuhle, akukho deformation emva kwexesha elide, ifuthe elihle kakhulu,
Kufana nokongeza izinto ezothusayo emhlabeni, ukuze ikhuseleke kwaye ingaphazamisi abamelwane.
Ukuqiniswa komatshini wokunyuka
Nika umntwana wakho yonke inyathelo
Ukutyeba okuphezulu kunye nokuqina okuqinileyo kokukhwela, usana luyakhasa ngokukhululekileyo kuyo yonke intsana nakukuwa konke
Iintsana zingayisebenzisa ngokukhululeka
Usebenzisa izinto ezintsha, akukho livumba likhethekileyo, umntwana angalikhangela ilizwe ngokukhululeka!
Umgangatho osikiweyo wepateni kunye neepateni zamagqabi, ukuthungwa okucacileyo, ukubambelela okuqinileyo, izinto ezixineneyo, amaxesha aliqela okubamba, ukonwabela intuthuzelo ngokuzithemba nangokhuseleko, ipateni ecacileyo yokulwa neskid, ekhuselekileyo neqinisekisiweyo.
Ingasetyenziswa kumagumbi okulala, amagumbi okuhlala, amagumbi abantwana, iifestile zebay, iindawo zokulala, iingcingo zabantwana, iibhalkhoni, imethi yezilwanyana zasekhaya, njl.
Imethi yethu yomgangatho ithengiswa ngokungqinelana nomgangatho wokuthumela ngaphandle kwaye ithunyelwa kumazwe amaninzi, njenge: United States, Japan, United Kingdom, Germany, Canada, Italy, Belgium, Denmark, Netherlands, Croatia njalo njalo.
Iimpawu zeMveliso: Imveliso ithambile kwaye intofontofo, ngokuguquguquka okuhle. Iqukethe amaqamza akhululekile kwaye athambileyo. Ityebile kwaye igcwele luthambe. Ingayifunxa ngokupheleleyo ifuthe, ikhusele usana kumaqhuma, kwaye ikhathalele ukukhula okusemgangathweni kosana.
Kulula ukuyila uyilo lwezixhobo, kulula ukuqaqa kunye nokuhlangana nangaliphi na ixesha, imiphetho yegiya icocekile, ukusikelelwa kuqinile kwaye komelele, kulula kwaye kulula ukuyiqaqa, kwaye ayithathi ndawo;
Ubungqingqwa obukhuselekileyo, ukubanda nobushushu, kufanelekile kumaxesha onyaka amane, kuthintela ukufudumeza ubushushu, kungabambeleli ebantwini ehlotyeni, kubanda nokugquma ukufuma ebusika;
Imathiriyeli eluhlaza ikhuselekile, ayinetyhefu, ayinakucaphukisa, isempilweni kwaye ayinabungozi, amandla aphezulu aqine, azinzile, kwaye udlulisile iziqinisekiso ezininzi zokukhathalela ngokukhuselekileyo impilo yosapho;
Ukungena manzi, ukungqinisisa ibala kwaye kulula ukucoceka. Nokuba ziindawo zeti, amabala obisi, amabala amanzi, isuphu, iinkozo zerayisi, okanye ilaphu elifumileyo, inokucinywa. Icocekile kwaye akukho ntsalela, kwaye inokusetyenziswa kwakhona, elula kwaye engenazingxaki;
Xa usana lufunda ukuhamba nokutsiba, lunokungavikeleki kwisandi kunye nokuncitshiswa kwengxolo, ukuze ingabangeli ngxaki kwabanye
Umatshini womlingo onokusetyenziswa lusapho luphela, umzali-umntwana, iyoga, ukufaneleka, ukonwabela ixesha elithe cwaka emva kwemini;
Inokunqunyulwa ngokukhululekileyo, isikwe ngokukhululekileyo ngokokhetho lwakho, iikona zinokubekwa, zikhuseleke kwaye akukho ziphelo zifileyo.
Egqithileyo Thicken yoga mat EVA impahla amadoda and women fitness mat Double-emacaleni umbala solid solid mat mat
Okulandelayo: Ukuthungwa kwabantwana okuxineneyo kumgangatho wokukrala ukhuko kumntwana osendlwini ngaphakathi ekhaya ongatyibilikiyo kumgangatho wokhuselo lwe-EVA
Iithayile ze-Eva Foam
Eva Dlala Mats
Dlala iithayile Mat
Ukungenelela Dlala Mat Puzzle Amagwebu Mats
Umdlalo wePuzzle wePuzzle Dlala iMat
Ukuthunga puzzle ikhaphethi emethini abantwana cra ...
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, AMP Iselfowuni Umgangatho wePuzzle yePuzzle, Umgangatho wePuzzle Mat Cushion, Umgangatho weMat Puzzle, Umgangatho wePuzzle wePuzzle, Umgangatho wePuzzle, Umgangatho wePuzzle wokuzilolonga iMat, Zonke iiMveliso